Monday, August 6, 2012 Axad, Sebtembar 8, 2013 Douglas Karr
Marnaba kama guuleysan doontid 100% iibka ka dib markii qof uu ku daro badeecada alaabadaada wax iibsiga, laakiin shaki kuma jiro inay tahay farqi u dakhligu ka soo baxayo. Waxaa jira xeelado dadka dib loogu soo celiyo… dib u habeyn ayaa ka mid ah. Ololayaasha dib-u-iibinta waxay raacaan dadka ka dib markay ka tagaan gawaarida wax iibsiga iyo xayeysiinta dib-u-iibinta iyaga markay booqdaan bogagga kale. Soo noqoshada ayaa caadi ahaan ku fiican ololeyaasha dib-u-eegista. Si kastaba ha noqotee, taasi waa ka dib markay sameeyeen
Waxaan dhawaan bilownay inaan la shaqeyno Liiska 'Angie's List' waxayna horeyba noogu furtay indhaha intee in le'eg oo meherado ah oo hogaamin ku hela qiimeyntooda, dib u eegisyadooda iyo heshiisyadooda. Ganacsiyada maxalliga ah ee macaamiishooda siiya adeeg aad u weyn, dib u eegista lagu sameeyay ee ku qoran Liiska 'Angie's List' waa dakhli saafi ah. Sida laga soo xigtay Sahaminta Suuqgeynta Raadinta Ganacsiga Yaryar ee American Express OPEN, ganacsiyada yaryar ee Mareykanka wali waxay ku kalsoonaan karaan ereyga-afka oo ah dariiqa ugu sarreeya ee dukaameeyayaashu ku heli karaan.
Jimco, Diisambar 9, 2011 Jimco, Diisambar 9, 2011 Douglas Karr
Waxaan soo dhajinay wax ku saabsan Milo, oo ah iibsiga eBay. Himilada Milo waa in alaab kasta ay ku taal shelf kasta sheeko kasta oo laga heli karo webka. Waxayna durba riixayaan dukaamada tafaariiqda xilligan fasaxa ah! Halkaan waxaa ku yaal talooyin waaweyn oo wanaagsan iyo fursado dukaamada tafaariiqda ah si loogu kabo iibintooda dukaanka iyaga oo taraafikada ugu geysanaya dukaankooda khadka tooska ah. Waxay u egtahay inay tahay waqtigii lagu diiri lahaa Jiinglaha Dawanka iyo buskudka Gingerbread, oo la bilaabo wadista
Toddobaadkii hore waxaan la hadlay Rob Eroh, oo maamusha kooxaha wax soo saarka iyo injineernimada ee Milo. Milo waa mashiin raadinta wax iibsiga maxalliga ah oo si toos ah ugu dhafan dukaanka tafaariiqda ee iibka (POS) ama Qorshaynta Kheyraadka Ganacsiga (ERP). Tani waxay u oggolaaneysaa Milo inuu noqdo mashiinka raadinta ugu saxsan marka ay timaaddo aqoonsiga waxyaabaha ku jira alaabada gobolkaaga. Hadafka Milo waa inuu lahaado shey kasta oo yaala shelf kasta oo sheeko kasta oo ku saabsan webka…
Sannadkii ugu dambeeyay ee aan la qaatay Patronpath wuxuu ahaa mid aan caadi aheyn. Shirkaddu waxay ku jirtaa kobcin ballaaran oo si weyn u guuleysatay! Waxaan ku guuleysanay abaalmarinta Techpoint Mira. Waxaan dhameystirnay horumarinta 4 isku xirnaanta POS - Micros, POSitouch, Comtrex iyo Aloha. Waxaan dib u cusbooneysiinay interface-ka isticmaalaha si aan ugu badino bedelida macaamiisheenna. Waxaan kudarnay shaqo ka fariisasho iyo astaamaha amniga arjiga. Waxaan xitaa ku tuurnay goobta Goobta Makhaayada annaga
Seddex shirkadood oo aan si dhow ula safannahay ayaa loo magacaabay finalka Indiana ee Mira Awards: ExactTarget - shaki kuma jiro kobcinta iyo hogaaminta cajiibka ah in shirkadani ay noqon doonto qof u qalma abaalmarinta. Waxaa jira qaybo ka mid ah nidaamka ExactTarget oo si fudud uga soo horjeedda sharciyada fiisigiska sida ugu dhakhsaha badan ee ay u soo saari karaan una diri karaan emayllada. Waan jeclaaday 2-dii iyo badhkii sano ee aan u shaqaynayey shirkadda ExactTarget! Isniinta, aniga
Isniin, November 5, 2007 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Subaxaan, Mark Gallo (madaxweynaha Patronpath) wuxuu la wadaagay maqaal aad u weyn The Indianapolis Star oo ku saabsan taariikhda iyo yoolalka Techpoint, oo ah koox u doodda tikniyoolajiyadda gobolka halkan Indianapolis. Si layaableh, waxaa laygu casuumay dadka naxariista leh ee Bitwise Solutions si aan marti ugu noqdo kulanka TechPoint jimcahan. Waad ku mahadsan tahay Ron iyo Kim casuumaadda! Mark ayaa i siiyay maalinta fasaxa ee aan kaqeyb galo runti waan ku qanacsanahay. Kani waa 'yar